श्रीमानको हत्यारालाई कारवाही नभएको भन्दै न्यायको लडाइ लड्दै आएकी भागरतिले गरिन आत्महत्या ! « Dhankuta Khabar
श्रीमानको हत्यारालाई कारवाही नभएको भन्दै न्यायको लडाइ लड्दै आएकी भागरतिले गरिन आत्महत्या !
प्रकाशित मिति : Jan 8, 2019
समय : 11:18 PM
कैलाली । अन्ततः कैलालीकी भागरति विकले न्याय नपाएको भन्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । श्रीमानको हत्या भएको र हत्यारा आँखै अघि भएर पनि कारवाही नभएको भन्दै निरन्तर न्यायको लडाइ लड्दै आएकी कैलाली गोदावरी नगरापालिका १४ की भागरति बिकले आत्महत्या गरेकी छिन् । न्याय खोज्दै हाम्रो सम्पर्कमा आएकी बिकका बिषयमा हामीले पनि रिपोर्टिङ गरेका थियौ ।
उनले श्रीमानको हत्या भएको भन्दै प्रहरी, प्रशासन, न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय तथा मिडिया सबै तिर गुहार्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएकी थिइन । तर अन्त्यत उनि पनि हारिन ।
आइतबार श्रीमानको शब भेटिएकै ठाँउमा उनको शब झुण्डिएको अवस्थामा भेटियो । न्याय नपाएरै उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । जिवित छदा उनि सधै आफू माथि अन्याय भएको भन्दै न्यायका लागि भौतारीरहन्थिन । कही कतैबाट सुनुवाई नभएपछि उनले अत्महत्याको बाटो रोजिन् ।
साऊदी फर्किन लागेका यी युवाले यस्तो दु:ख पाएपछि भक्कानिँदै भने,- सरकार नै गतिलो छैन, के गर्ने (भिडियो सहित)